Sidee dib u qabsashadu u beddeshaa shaqada?
Habka aasaasiga ah ee jiilka xiriirka waa isweydaarsiga dib u qabsiga bogagga internetka ee la xiriira. Is-beddeladan badanaaba waxay raacaan jaantusyada sida "waan ku talinaynaa," "kafaaladeena," "lamaanahayaga" ama wax la mid ah. Ganacsatadu waxay u maleynayaan in haddii ay isku xidhiidhiyaan ilaha, markaa ilahaasi waa inay si cad u xiraan iyaga. Haddii kale, ganacsatadu waxay soo diri doonaan emails tiro fariimo isku mid ah. Iyadoo sidoo kale ah habka ugu dambeyn ee xiriirinta, ayaa sidoo kale ah hab raqiis ah ama xitaa bilaash ah si loo helo xiriiro khuseeya. Si kastaba ha noqotee, habka isku xirka xidhiidhkan ayaa faa'iido hore u lahaa, laakiin hadda maahan - fortune lounge all slots. Makiinadaha raadinta ayaa noqday mid caqli badan oo fahamsan in noocyada soo socda ee xiriirka aaney ahayn codad run ah oo website-ka ah, laakiin halkii ay ku socotaa oo kaliya shabakad si kor loogu qaado darajooyinka. Taasina waa sababta makiinadaha makiinada raadiyeyaashu ay bilaabeen inay qiime yar ku siiyaan xiriirrada dibedda ah ee ku calaamadoobay. Xidhiidhada isgaadhsiinta ee dambe ayaa si buuxda loo dhimay, ganacsiyado badan oo yaryar ayaa ka lumay darajooyinkooda iyaga oo u sabab ah iyaga. Noocyada noocan oo kale ah ma keenaan ciqaab aad u daran Google, laakiin waxay u badan tahay inayan wax qiimo ah ku siin doonin ololaha aad ujecel. Xidhiidhada isgaarsiinta waxay keeni karaan qiimo qadar ah oo ku yaalla goobaha. Si kastaba ha ahaatee, qiimahaasi wuxuu noqon doonaa ka hor intaanay jirin, oo ka yaraa tayada dhabarka. Si kastaba ha ahaatee, qiime yar ayaa weli qiimeeya. Taasi waa sababta aadan u diideynin xiriirinta is-dhexgalka. Noocyada xidhiidhyadani waxay ku siin karaan faa'iido kale - gaadiidka gudbinta. Laga yaabee inaadan heleynin taraafikooyin farabadan oo ka yimaada isku xirka isdhaafsiga, laakiin weli, waxay faa'iido u tahay ganacsigaaga internetka.
Sidee loo abuuraa isku-xiriir is-dhexgalka?
Dhamaan xidhiidhada isdhaafka ah looma siman yahay. Qaar ka mid ah waxay ka qiimo badan yihiin kuwa kale, iyada oo ku xidhan ilaha webka ee aad dib u baddeshay. Waa inaad kaliya beddeleysaa xiriirka ilaha webka la xiriira. Waxay u muuqan doontaa wax laga shakisan yahay matoorada raadinta haddii aad ku saleysantahay habka waxbarashada iyo tafaariiqda, tusaale ahaan, buugaagta, laakiin laysu xariiriyo hay'adaha socdaalka. Si kastaba ha noqotee, waxaad ka heli kartaa dhul caadi ah websaydh kaas oo ugu yaraan yar la xidhiidha warshadahaaga. Tusaale ahaan, haddii hey'adda socdaalka ay daabacday maqaal ku saabsan buugaag ku saabsan mawduucyada hordhaca ah, markaa dukaanka buugta internetka ayaa ku eegi doona dabiicada gudaheeda.
Qaar ka mid ah xiriirada ka imaanaya goobaha aan khilaafka laheyn kuma dhicin sumcadaada, laakiin haddii aad wax badan ka badan tahay, waxaad halis u tahay inaad ka dhigto shakigaaga xiriirkaaga makiinadaha raadinta. Xidhiidhada badan ee aan khuseyn ayaa u muuqda inay u eg yihiin spam waxayna kor u qaadi karaan calan casaan ah oo ku saabsan noocyada isku xirka hawlaha isku xirka ah ee aad ku mashquulsan tahay. Taasna, dhammaan gaadiidka la soo gudbiyey way baaba'ayaan maaddaama isku xirnaanta isdhexgalkaas la dhimayo.
Sababta kale ee aad uga taxaddarayso tayada iyo ku-xirnaanta bogga internetka ee aad is-weydaarsatid xiriiriye waa inaad adigu ciqaab u ah inuu ku xiro websaydhada tayadoodu hooseeyso. Haddii Google uu ogaado in aad isku xireyso waxa uu go'aamiyo sida ilwareedka spammy webkoodu hooseeyo, sumcaddaada oo ah ilaha internetka awoodda leh waa la burburin karaa. Waxay ku siinaysaa calaamad diiran oo ku saabsan nidaamka raadinta, iyo goobtaada waxay gali doontaa liiska kheyraadka internetka laga shakiyo.
Taasi waa sababta aadan u hubin tayada iyo sumcadda ilaha webka, ha is-bedelin. Waxay kaa caawin doontaa inaad ka hortagto dhibaatooyinka mustaqbalka. Waxaan sidoo kale kugula talinayaa inaad dib u eegto tirakoobka bogga lixdii bilood ee ugu dambeeyey maxaa yeelay waxay ku tusi kartaa xaalada websaydhka ee websaydhka (socodka gaadiidka, isbedelka, dadka isticmaala wakhtiga ku baxa goobta booqasho kasta, iwm. ) iyo waxa ka muhiimsan waxay muujineysaa in website-ka lagu ciqaabay makiinadaha raadinta ama haddii kale. Si aad u hesho xogta tirakoobka, waxaad isticmaali kartaa Analytics Naqshad Websaytka.